Tag: fivarotana | Martech Zone
Zoma, Jolay 30, 2021 Zoma, Jolay 30, 2021 Jui Bhatia
Ny indostrian'ny varotra dia indostria goavana manatanteraka asa sy hetsika maro. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fironana ambony amin'ny rindrambaiko mpivarotra antsinjarany izahay. Aza miandry ela, andao hiroso amin'ny fironana isika. Safidy fandoavam-bola: ny poketra niomerika sy ny vavahady fandoavam-bola samihafa dia manampy ny fahafaha-mandanjalanja amin'ny fandoavam-bola amin'ny Internet. Ireo mpivarotra dia mahazo fomba mora nefa azo antoka hamaliana ny fepetra takian'ny mpanjifa. Amin'ny fomba nentim-paharazana dia vola ihany no avela handoa
Ny fotoana fandefasana mailaka dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny taham-pahafahana misokatra sy tsindry amin'ny fampielezana mailaka andiany izay andefasan'ny orinasanao amin'ireo mpamandrika. Raha mandefa mailaka an-tapitrisany ianao, ny fanatsarana ny fotoana dia afaka manova ny firotsahana amin'ny roa isan-jato… izay mety handika vola an-jatony tapitrisa dolara. Ny sehatr'asa mpanome serivisy mailaka dia lasa matanjaka kokoa amin'ny fahaizany manara-maso sy manatsara ny fotoana fandefasana mailaka. Rafitra maoderina
Ny Playbookanao marika amin'ny famoahana vanim-potoana fialantsasatra nahomby tamin'ny taona 2020
Alakamisy Oktobra Oktobra 15, 2020 Alakamisy Oktobra Oktobra 15, 2020 Michael Della Penna
Ny valanaretina COVID-19 dia nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiainana araka ny ahalalantsika azy. Ny fenitry ny hetsika ataontsika isan'andro sy ny safidintsika, ao anatin'izany ny zavatra ividianantsika sy ny fomba fanaovantsika izany, dia niova tsy nisy fambara niverenana tamin'ny fomba taloha intsony atsy ho atsy. Ny fahafantarana ny fialantsasatra eo akaiky eo, ny fahaizana mahatakatra sy maminavina ny fihetsiky ny mpanjifa mandritra io fotoana tsy dia fahita amin'ny taona io dia ho lakilen'ny fitantanana fahombiazana, miavaka.
Omnichannel Marketing dia manome mpanjifa tsy mivadika sy sarobidy kokoa
Alatsinainy Desambra 31, 2018 Alatsinainy Desambra 31, 2018 Chuck Hengel
Ny marika dia tsy maintsy manaparitaka ireo silo an-tserasera sy ivelan'ny daholobe hahatratrarana ny andrasan'ny mpanjifa. Rehefa mandeha ny ohabolana taloha, ny fisondrotan'ny ranomasina dia mampiakatra ny sambo rehetra. Mihatra amin'ny marketing mahomby amin'ny mpanjifa ihany io fitsipika io. Ny fampielezana fampielezam-peo mahery vaika dia afaka mampitombo ny fiantraikan'ny hetsika marketing hafa, manomboka amin'ny fampitomboana ny tranokalanao sy ny fivezivezena amin'ny fikarohana ka hatramin'ny fampiroboroboana ny fifandraisan'ny haino aman-jery sosialy sy ny feon'ny fifandraisam-bahoaka. Ireo mpivarotra savvy dia nahatsapa an'izany nandritra ny taona maro ary nanaparitaka paikady multimedia hanararaotana